खेल्ने बालबालिका हँसिला र आत्मविश्वासी
माघ १८, २०७६ शनिबार
काठमाडौं, माघ १८ गते । शारीरिक व्यायाम र मानसिक कसरत हुने पहिलेका खेललाई अचेल मोबाइल, आइप्याडले विस्थापित गरेको छ । मानिसको सहयोगी (दास) प्रविधि होइन, प्रविधिको दास मानिस बन्दै गएको छ ।
बाल्यकालमा जाडो महिनाको बिदा हुँदा गुच्चा खेलेको झलझली सम्झना आउँछ जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई । उहाँले सहरका गल्ली, सडकमै गुच्चा खेल्दै कुद्ने गरेको सम्झना कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले ती दिन धेरै रमाइला थिए । असनको चोकमा गुच्चा खरिद गर्न जान्थ्यौँ । एक पैसाको खरिद गथ्र्यौं होला त्यति सम्झना त भएन तर पनि खल्तीभरि गुच्चा हुन्थे । मोबाइलको जमानामा भने अचेल सहरमा गुच्चा खेल्ने बालबालिका पाउन गाह्रै छ । एक त खेल्ने ठाउँ पर्याप्त छैन, अर्को मोबाइलमै झुम्मिन्छन् प्रायः सबै बालबालिका भन्नुहुन्छ ।
संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशी आफ्नो निशानामा तारो हान्ने एकाग्र शक्ति वृद्धि गर्ने खेलमध्ये मेरो रोजाइ गुच्चा हो । काँचका गोला गुच्चा हाम्रो बगलीमा प्रायः सबैसँग हुन्थे भन्नुहुन्छ । उहाँले गुच्चाले हानेर टाढाको गुच्चा ठोक्के ताक विकास गर्न निकै अभ्यास गरिन्थ्यो, बाल्यपनको सम्झना गर्दै घरका भित्तामा गुच्चा हानेर अभ्यास गर्दा भित्ताभरि दाग बस्थे । त्यो बदमासीको सजाय पनि पाइन्थ्यो भन्ने कुरा स्मरण गर्नुभयो ।
गुच्चा दुई जनाको बीचमा खेलिन्छ । हार–जितमा गुच्चा नै लिने वा हार्नेले आफ्नो खुट्टाको गोलीगाँठोमा गुच्चाको ठोकाइ खाने सहमतिमा खेल सुरु हुन्थ्यो । गोलीगाँठो ठोक्ने सजायलाई ‘गौ छ्या य्गु’ भनिन्छ । जित्नेको दयामायामा त्यो ठोकाइ साह्रो या सामान्य हुन आउँछ । कहिले काहीँ रुनैपर्ने गरी ठोकाइ खाइन्छ ।
हामी सबै नेवारीमा खेल्थ्यौँ, नेवारी बोल्थ्यौँं । शारीरिक एवम् मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि बाल्यवस्थामा खेलकुद र मनोरञ्जनलाई अहिले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जोशीको सुझाव छ ।
चिकंमुगल टोलको कृष्ण सत्तलमा बुबाको पालादेखि खेलौना पसल गर्दै आउनुभएका दीपेन्द्रकुमार रञ्जितकार पहिले गुच्चा खरिद गर्न बालबालिका खुब आउँथे । तीन सय जति गुच्चाका प्याकेटको पहिले दुई रुपियाँ मात्र पथ्र्यो । एक सुका वा एक मोहोर हुनु नै ठूलो कुरा थियो, त्यो बेला भन्नुहुन्छ ।
टोलकै र अरू नजिकका ठाउँबाट पनि बालबालिका त्यहाँ गुच्चा किन्न आउँथे, एक पैसा वा दुई पैसा बोकेर । गुच्चा खेल्दा जितेर बालबालिकाले जम्मा पारेका १५० वा दुई सय गुच्चा बेच्न पनि आउँथे । चहलपहल निकै हुन्थ्यो, बालबालिकाको ।
अहिले बालबालिकाले गुच्चा खेल्नै छाडिसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसरी गुच्चा किन्न आउने बालबालिका नै लगभग शून्य भइसके, बेच्न आउने त टाढैको कुरा हो । रञ्जितकार खेल्ने ठाउँ छैन, सडक र गल्ली गाडी र मोटरसाइकलले ढाकिसके, खुला ठाउँ हराइसक्यो भन्नुहुन्छ । उहाँ मोबाइल, टिभीमा कार्टुन भएपछि दङ्ग पर्ने अहिलेको पुस्ताले गुच्चा पनि मोबाइलमै खेल्न बेर छैन ! अहिले बढी चल्ने खेलौना चाइनिज कार, प्लास्टिकको बन्दुक, ब्याट, बल बिक्री हुन्छ भन्नुहुन्छ ।
बालविवाहको चलन रहेको उतिबेला केटा र केटी सँगै खेल्न हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यताले गर्दा भाइबाहेक अरू केटा साथीसँग नखेलेको अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाल बताउनुहुन्छ । उहाँले बाल्यकालमा गट्टा, तेलकासा, कबड्डी, रुमाल लुकाई, डोरी तानातान, पिङ, ढक्का, वनभात खाने, पुतली, गुच्चा जस्ता खेल खेलेको बताउनुभयो । बालापन धोबीचौरमा बिताउनुभएकी भुसालले आफ्नो बालापन नसम्झेको धेरै भएको थियो अहिले ती रमाइला दिन सम्झँदा ज्यादै खुसी लागिरहेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले बाल्यकालमा गरेको उपद्रो सम्झेर मुस्कुराउँदै त्यसबेला पुरुष रुँदै मलामी जान्थे, हामी भने पुतलीको लास बनाएर रोएको जस्तो गर्दै मलामी गएको नाटक गथ्र्यौं । भाइसँग गुच्चा किन्न जान्थ्यौँ अनि रमाइलो गरी खेलेको दिन भुल्न सक्दिन । अहिलेका बालबालिकाले उतिबेलाजस्तो खेल खेलेर रमाइलो लिन सकेनन् र अब त झन् सक्दैनन् । हामीले जस्तो उत्कृष्ट बालापन बिताउने अवसर अबका केटाकेटीलाई छैन किनभने उनीहरूलाई प्रविधिले दास बनाइसक्यो भन्नुभयो ।
नेपालकै पहिली नायिका भुवन चन्दले बाल्यकालमा गट्टा, तीनखुट्टी, गुच्चा, लुकामारी जस्ता खेल खेलेको मलाई धेरै याद छैन । सानैदेखि कलाकारितामा लागेकाले खेल्ने फुर्सद धेरै भएन भन्नुभयो ।
अहिलेको काठमाडौँको अवस्था हेर्दा उतिबेलाका खेल प्रायः सबै लोप भइसकेको अनुमान गर्न कठिन छैन । यी खेल लोप हुनुमा प्रविधिको विकाससँगै बढ्दो सहरीकरणको प्रभावलाई कारण मान्न सकिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यस्तै त्यौडः का गुच्चा व्यापारी अष्टनारायण पुजारीले पहिले जस्तो अहिले व्यापार नभएको गुनासो गर्नुभयो । पहिले जाडो महिनामा भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो तर अहिले के गर्मी महिना, के जाडो महिना बालबालिका गुच्चा, चुङ्गी जस्ता खेल खेल्न नै बिर्सिसकेका छन् । ढलमा खसेको पनि गुच्चा खोजेर खेल्ने गथ्र्यौं, साना केटाकेटी हरेकको खल्तीमा गुच्चा हुन्थ्यो तर अहिले हरेकको हातमा मोबाइल भइसकेको छ । उहाँले घर, रेस्टुरेन्ट सजाउन भनेर गुच्चा खरिद गर्न आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सजावटका लागि गुच्चा
अहिले कसैले गुच्चा व्यापार थेगेका छन् भने ती आर्किटेक्ट हुन् अहिले गुच्चा सजाउने सामग्री बनेको छ, कसैले लाइट मिलाउन, कसैले अक्बारियममा राख्न र कसैले इन्टेरियर सजाउन हो भन्नुहुन्छ रञ्जितकार ।
लोकन्थलीस्थित ब्रदर्स हभ क्याफेमा पनि गुच्चाले टेबल सजाइएको छ । सञ्चालक रचना बुढाथोकीले आफ्नो क्याफेमा केही नयाँपन दिन गुच्चाको सजावट गरेकी हुँ भन्नुभयो । खानेकुरा टेबुलमा राखेर खाने भएकाले टेबलमाथि गुच्चा राखेर सिसाले छोपेको बताउँदै उहाँले गुच्चाबाट सजाइएको टेबुल देखेपछि बालापनको झल्को आउने भएकाले पनि यसरी सजाइएको जानकारी दिनुभयो ।
खेलले क्षमता विकास
खेल सिकाइको एउटा दरिलो माध्यम पनि हो । बालबालिकाले खेलकै माध्यमद्वारा धेरै कुरा सिकिरहेको हुने मानसिक चिकित्सक डा. तृष्णा घोषले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजमा घुलमिल हुन, अनुशासन, समय र अवसरको महìव, सहयोग, सहकार्य, नैतिकता, इमानदारिता, सफलता–असफलता, धैर्य जस्ता सीपको विकास खेलको माध्यमद्वारा हुने पनि बताउनुभयो ।
खेल खेलेर हुर्केका बालबालिका हँसिला, मिलनसार, रमाइला, सहयोगी, आत्मविश्वासी हुने गर्दछन्, घोषको अनुभव छ । त्यसैले मानसिक रोगीलाई पनि खेलको माध्यमले धेरै कुरा बुझाउने अथवा खेल थेरापी पनि गरिन्छ ।
खेल हार्दा असफल हुने खेलाडी अरू क्षेत्रका व्यक्ति जस्तो ज्यादै निराश हुने, डिप्रेसनमा जाने, आत्महत्या गर्ने जस्ता घटना प्रायः सुनिँदैन । तनाव बहन गर्ने क्षमता, आत्मबल जस्ता सीप उनीहरूले खेलबाट नै सिक्ने गर्दछन् । असहज अवस्थामा आफूलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा हुने डा. घोषको भनाइ छ ।
खेल प्रतिष्ठाको विषय
प्राध्यापक निर्मला उप्रेतीले खेल मनोरञ्जनको सशक्त माध्यम हो । खेल खेल्ने र हेर्ने दुवैलाई यसले आनन्द प्रदान गर्छ । मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोरञ्जन अति आवश्यक छ । खेल मनोरञ्जनमा मात्र सीमित छैन । यो प्रतिष्ठा, मानसम्मान, जीवनयापन, व्यवसाय जस्ता कुरासँग पनि जोडिएर आउने गर्छ भन्नुभयो ।
विश्वकप फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलमा हार–जित ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हुनेगर्छ । यस्ता खेलको आयोजना गर्नु, सहभागितासम्म जनाउन पाउनु, राष्ट्रका लागि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो । खेल शक्ति, क्षमता, कला, प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो । खेलले समाज जोड्न, समाजमा ऐक्यबद्धता ल्याउन साथै समाजलाई कतिपय अवस्थामा विभाजित
गर्नसमेत सक्छ ।
सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्न इम्बोस्ड नम्बरप्लेट तत्काल जोड्न निर्देशन
नेवारी समाजमा मनाइयो प्रेम दिवस
कोरोनाबीच क्रिसमस, ठाउँठाउँमा सजिए क्रिसमस–ट्री
कोरोना लाग्नेलाई मात्र पीडा थाहा हुन्छ
स्वास्थ्य मापदण्डका साथ सिकाली जात्रा
अठ्ठाइस तोला सुनको लेपले बन्यो गजुर (फोटो फिचर)